Fahafatesana mampiahiahy :: Misy dian’antsy ny saokan’ ilay vehivavy hita faty • AoRaha
Fahafatesana mampiahiahy Misy dian’antsy ny saokan’ ilay vehivavy hita faty
Nisy dian’antsy teo ambanin’ ny saokan’ny vehivavy iray hita faty, tany Ankevaheva, any antampon-tanànan’Andapa, omaly maraina. Tsy nahitana ratra hafa ny vatany fa io tsindron’ antsy io no ahiana ho nitarika ny fahafatesany. Teny aminy ny fitafiany rehetra. Tsy fantatra ny olona namono an’ity vehivavy ity. Eo am-panaovana ny fanadihadiana hikarohana izany ny mpitandro filaminana, any an-toerana.
Tamin’ny alin’ny alatsinainy no nisian’ny famonoana nahafaty an’ilay vehivavy, manodidina ny 25 taona. Heverina ho tany an-toeran-kafa no nandatsahana ny ainy, mialoha ny nametrahana ny vatana mangatsiakany teo amin’ny toerana misy bozaka. Fantatra fa nivoaka niaraka nisotrosotro tamin’ny namany izy, tamin’io alin’ny alatsinainy io, saingy niharamboina teny an-dalana nandeha irery namonjy fodiana.
Matetika ny fahafatesana vehivavy mampiahiahy tahaka izao, tany Andapa. Nambaran’ny loharanom-baovao iray any antoerana fa fito izao ny vehivavy maty novonoin’olona, tao anatin’ny sivy volana.
“Efa nisy ny trangana fahafatesana toy ity hita teny Ankevaheva ity. Misy ireo arahina fanolanana sy fandrobana. Tsy mbola nisy tratra ireo olon-dratsy. Miaramisalahy samy manao fanadihadiana sy fikarohana ny tompon’ antoka amin’izany izahay polisy sy ny avy amin’ny zandary”, hoy ny polisy any Andapa.
Habibiana :: Olona efatra notsatotsatohan’ ilay lehilahy tamin’ny antsy
Lozam-pifamoivoizana :: Taksibe nahadona fiara efatra teny Tsimbazaza